10 pickpockets izimfihlo ukuthi kufanele wazi
Ukwesaba izinto zabo travel? Nazi izimfihlo ezimbalwa mayelana pickpockets ukuthi kufanele wazi.
Izingubo zakho unezinkinga
Pickpockets ukhethe umhlatshelo, esekelwe inkimbinkimbi impumelelo, futhi uma ibukeke izivakashi ejwayelekile, okungukuthi, uma egqoke izingubo ezibizayo noma into lisho uvela kubantu abavamile, khona-ke wena okusezingeni eliphezulu ingozi zone. Kufanele sizame ukuzifanisa nabantu bendawo ngangokunokwenzeka. Zama bangagqoki izinto ezibizayo wehluke esixukwini.
Pickpockets benza konke okusemandleni abo bheka ayinangozi
Pickpockets futhi enza konke okusemandleni akhe ukuze ufane ne imvelo, ngoba ngale ndlela bangase babonakale ayinangozi futhi ayinazo usongo. Futhi uma ufuna pickpockets esixukwini, kufanele sinake labo abantu ababonakala ube nesizotha kakhulu futhi enesizotha. Ngokuvamile, kuba yizo izingubo ezejwayelekile kakhulu, okungukuthi, jeans noma ezemidlalo izinto.
Bavame basebenza ngababili noma ngamaqembu
Ezinye pickpockets kukhona amakhosi zangempela, futhi ungakuphuca ngaphandle kwezinkinga wedwa, kodwa iningi lazo asebenze nalabo abambisene nabo. Mhlawumbe umuntu oyedwa oluyosichezukisa ukunakwa kwakho, sicela ukuthi ungathola kanjani endaweni ethile, kuyilapho ezinye uyodonsela isikhwama wena. Noma ku ezokuthutha zomphakathi kuzokusa esidlule isixuku, ngokungazelelwe uphelelwa imali. Kunoma ikuphi, kufanele eduze iqaphe amaqembu ezinkulu nezincane zabantu.
Ngisho noma wena ezindaweni edolobheni ekhaya izivakashi bayanithobela basengozini enkulu pickpocketing. Hlola izinto - lena yokuchitha isizungu omkhulu, kodwa kufanele benze isiqiniseko sokuthi wonke zakho eziyigugu ziphephile.
Ezinye izikhwama kulula ukweba
Akubona bonke izikhwama bayalingana. Ngisho nalabo izikhwama ukuthi Ubonakala ezingaphezu kuka ephephile, kungaba khona isisulu esihle kakhulu pickpockets. Izikhwama Castle, isibonelo, awekho njengoba ephephile njengoba ucabanga. Kodwa bamba Kuwumgomo eziyinkimbinkimbi nganoma yisiphi umkhuthuzi othile.
Ungakwazi isimo ngokwakho lula
Pickpockets ungathandi ukuba amehlo futhi asole, ngakho uma bekwazi ukusebenzisa kwakho njengento esizayo nokweba, bayokwenza ke. Ngokwesibonelo, uma ekhukhwini lakho onqenqemeni ebonakalayo kwefoni yakho ephathekayo, bangakwazi umane ubambe emaphethelweni bese ulinda kuze uya. Ngenxa yalokho, ifoni kuyoba sezandleni zabo, futhi ngeke bezwe lutho. Ukuze ugweme lesi simo, njalo ukuhlola izikhwama zakho futhi uwafihle ngangokunokwenzeka.
Pickpockets - amakhosi ngokungabi yisiphazamiso
Ezinye ayeke nawe ukubuza ukuthi ungathola kanjani kwenye indawo, abanye ngeke akucele ukuba ukuthatha isithombe ukuba babe izandla zakho ikhamera umnyuziki imizuzwana embalwa, omunye angase aphonse ngisho wena itiye noma ikhofi, futhi uzoba matasa kakhulu bahlanza izingubo ukucabanga ngezinto zakho zenani elikhulu. Uma umuntu ecela ukuba ukuthatha isithombe, awudingi ngempela ukunqabela kuye. Vele uhlole, ngokuphepha zicashile zonke zakho eziyigugu.
Abakwazi ukusebenzisa ngomusa wakho kuwe
pickpockets abaningi usebenzisa umusa wakho kuzobazuzisa. Uma uthi nhlá, ebingasho indoda yendawo lehla isikhwama igilosa, futhi, yebo, umsize ukuqoqa kwabo, kodwa kulokhu omunye umkhuthuzi othile lisusiwe kusukela isikhwama noma ocingweni lwakho. Lokhu akusho une sokuyeka Umuntu omuhle futhi waba nomusa, kodwa kufanele sikhumbule njalo ukuthi amaningi abantu emhlabeni ubani nganoma isiphi isikhathi nokusebenzisa kwakho lezi zimfanelo kuwe.
ukuhlaselwa yabo ingavinjelwa
Ngokwemvelo, ungathanda ukuhamba ukugqoka cute esikhwameni uthenge ngokukhethekile le njongo, kodwa uma uya endaweni izivakashi eyaziwa ngokuba pickpocketing njalo, ukuhamba esikhwameni noma kuphesi komgwaqo - lena okukhethayo best. Ezinye izikhwama travel kanye wallets ufakwe ngaphansi izingubo zakho, kuyilapho omunye is ngokuphepha eboshelwe ezingongolweni ngaphambili okhalweni ezingeni. Emigwaqweni kungaba amashumi pickpockets, kodwa uma bonke zakho eziyigugu avikelekile, ngeke inhloso yabo.
Ngokwezwi nezwi igama elithi umuntu kungaba umkhuthuzi othile
Pickpockets sisebenzisa ubuchwepheshe obufanayo ngokuthi abenzi bemilingo, ngoba indlela yokuzilibazisa, isikhathi esifanele futhi dexterity. Kukhona inani elikhulu izifundo lapho ungafunda "magic" ukweba, ngakho umuntu ngamunye bangaba umkhuthuzi othile uma uthanda. Lokhu kusho ukuthi kukhona pickpockets okuningi kuka ungase ulindele emigwaqweni. Noma ubani otholakala emgwaqweni kungaba umkhuthuzi othile, ngakho baqaphe.
Indlela yokulungisa emshaya umyeni wayo? Kuphi ukususa eshaywe?
I imithetho ethize yokuziphatha kahle ephephile
Izinhlobo Ezimweni eziphuthumayo, izici kanye ngezigaba
FSO: emagama izifinyezo. Russian KaHulumeni Yezokuphepha: Isevisi, sokuqeqesha kanye nekheli
Imiyalelo Ukuvikelwa zabasebenzi nokuphepha: ngubani eba eziqukethe
Indlela ukususa igciwane ku isikhangiso ikhompyutha
"Ingabe Ohulumeni Banalo Lonke" (Sochi) - gem phakathi izakhiwo idolobha
Sibhedlela "Inga" e Zavodoukovsk: Izibuyekezo sokwelashwa ukuphumula
Wort iSt John analo izinwele (uwoyela, decoction, ukumnika): isicelo, ukubuyekezwa
Kanjani ukuze ufunde sokuzindla
Indawo yokudlela-lapho kudayiswa khona utshwala "Tower" (Tula) - indawo kumnandi kakhulu edolobheni
Loan lezimpahla. tesakhiwo